तिमीलाई चाहिएको यहि थियो, देश लु’ट्ने वहाना । जुन वहाना ल’कडाउन वनेर आइदियो – विनोद त्रीपाठी – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
तिमीलाई चाहिएको यहि थियो, देश लु’ट्ने वहाना । जुन वहाना ल’कडाउन वनेर आइदियो – विनोद त्रीपाठी
काठमाण्डौं । तिम्रो शरिरको मायाले तिमी यो गरिरहेका छौं । जनताको मायाले होइन । तिमीलाई एउटै कुरा थाहा छ, ‘वन्द, चक्काजाम अनि वन्द वन्द व’न्द ।’ यो तिमीलाई कसैले सिकाउन पर्देन । किनकी तिमी यहि बन्दकै बीजवाट जन्मिएका हौ । तिमीले जानेको यहि हो । व’न्द गर्न तिमी सिपालु छौ । लकडाउन।
नेपाली भाषामा ब’न्दावन्दी । यो भनेकै ब’न्द हो । चक्काजाम र यहि बन्दकै आधारमा तिमी यहाँसम्म आइपुगेका हौ । हजारौं जनता मारेर आयौ । अनि अहिले सत्ता चलाएका छौ । अनि तिमी कसरी वन्दवाट टाढा हुन सक्छौ ?
‘वन्द’ तिम्रो मित्र हो । जनता ति’म्रा शत्रु हुन् । जनतालाई घर भित्र थुनेर तिमी मस्तले भ्रष्टाचार गरिरहेका छौं । अनि भन्छौ, अहिले लकडाउनको विकल्प छैन । एकातिर, तिमी जनतामा भय छरिदिन्छौ, अ’र्कोतिर तिमी देशको ढुकुटी लुटिरहेका छौ । तिमीले यो अवसर प’र्खिरहका थियौ । गजबको अवसर पायौ देश लुट्न ।
अहिले शक्ति राष्ट्रले देश बन्द गर्न लगाएपछि तिमीलाई क्या वहाना मिलेको छ, लकडाउन गर्न । अनि यहि लकडाउनको अवसरलाई तिमी सात पु’स्तालाई पुग्ने सम्पति जोडिरहेका छौं । तिमीलाई के थाहा, लकडाउनले आधा जनता यसै मर्देछन् । कोठामा कैद भएर, वाटोमा लड्किएर, भोकै ओछ्यानमा मडारिएर अनि ति’म्रा रुखा रुखा शब्द सुनेर । तिमीमा जनताको माया थियो भने त कोरोना आउनु पहिले नै सिमाना बन्द गर्थ्यौ ।
जहाज आउन रो’क्थ्यौ । महंगी घ’टाउँथ्यौ । रोजगार दिन्थ्यौ । उपचार दिन्थ्यौ । न्याय दिन्थ्यौ । तिमीलाई जनताको माया थिएन भन्ने त यस्ता हजार उदाहरण छन् नि ।
त्यसैले, तिमी ल’कडाउन थ’प्न पराइ आदेश पर्खेका थियौ, अनि जनतालाई थुनिदियौ । कहिले दक्षिणको, कहिले उत्तरको कहिले पश्चिमको आदेश वाहेक तिमीले जनताको आदेश कहिल्यै सुनेनौ । किनकी, तिम्रो सिद्धान्त नै आयातीत हो । तिमीलाई जनताको सार्बभौम भन्ने थाहा छैन । त्यहि भएर ति’मी विदेशीको आदेशवाट ल’कडाउन चाहन्छौ।
अझ अहिले वि’श्वमा शक्ति देशहरुले साना देश’हरुलाई आदेश दिइरहेका छन् । वन्द गर । विश्व स्वास्थ्य संगठन त कहिले कुन देशको कहिले कुन देशको आदेशमा संचालित संस्था हो । अहिले जैविक ह’तियार प्रयोग गरेर विश्व कब्जा गर्नेले डब्लुएचओलाई प’रिचालन गरेको छ । यसको काम भनेको विश्वलाई भयभित पार्ने हो ।
रुपमा हेर्दा यसले स’चेत पारे जस्तो देखिन्छ, तर सारमा विश्व कब्जा गर्ने एक शक्तिलाई यो संस्थाले सघाइरहेको छ । डब्लुएचओका म\_हानिर्देशक टेड्रोस एधानोम इथियोपिया देशका हुन् । यी ब्यक्ति विचित्रका छन् । डब्लु’एचओका अन्य सदस्यहरु यिनलाई रुचाउँदैनन् । यिनले केहि दिनदेखि आँफुलाई मार्न धम्की आएको वताइरहेका छन् ।
जब पत्रकार सम्मे’लनमा यिनको भाषण आउँछ, अनि विश्वभरका मानिसहरु यिनको राजीनामा मागिरहेका हुन्छन् । आधा भन्दा प्रतिक्रियाहरु यि’नलाई गा’लीको बर्षा आएको हुन्छ । यी टेड्रोस इ’थियोपियामा स्वा’स्थ्यमन्त्री हुँदा असफल भएका थिए । अहिले डब्लु’एचओमा काम गर्ने हजार भन्दा बढि चिकित्सक, विज्ञ र बैज्ञानिकहरु यिनको कामले हैरान छन् ।
तिमीले यो बुझेनौ । किनकी तिमीले यो बुझ्न चाहन्नौ । तिमीलाई चाहिएको यहि थियो, देश लुट्ने वहाना । जुन वहाना लकडाउन वनेर आ’इदियो । तिमी त महलमा बस्छौ । मिठो मिठो रोजेको परिकार खान्छौ, विरामी परे घरमै चिकित्सक बोलाउँछौ । तिमीलाई त लकडाउनले का’म पनि गर्न परेको छैन । कति सुख मिलेको छ । तिम्रो मनमनले भनिरहेको छ, आहा यो लकडाउन सधैं भइदिए ! तिम्रो जिवन मस्त छ अहिले ।
तिमीले जनता भोकै म’रिरहेको देख्दैनौ । तिम्रो सुचनाले चिकित्सक उपचार गर्न मान्दैनन् । तिम्रो सुचनाले रुघा खोकी लागेको मानिसदेखि मानिस नै भाग्ने गर्छन् । अस्पतालहरु तिम्रो सु’चनाकै आडमा विरामीलाई परैदेखि बाटो थुन्छन् । तिमीलाई थाहा छ कि छैन, अहिले उपचार गराएका भनिएका कोरोनाका ९ जना विरामीसंग कुनै चि’कित्सक नजिक पर्देनन् ।
बागलुङमा उपचार गराएकी भनिएकी अंशु सापकोटाले अहिलेसम्म डाक्टरको मुख नदेखेको भनेको सुन्न तिमीलाई फुर्सद छैन । भगवान भरोसाबाट जनता बाँचिरहेका हुन् । तिम्रो यो कथित लकडाउन सर्तकता वा’इहात थियो र छ । तिमी जनताको दुख देख्दैनौ ।
देखेर पनि तिमी अरुको दु’ख सुन्दैनौ । किनकी, तिमीले यस्ता क्रुर काम कति गर्यौ गर्यौ । तिम्रो बंशाणुत गुण भनेकै जनता मार्नु थियो । हिजो, गोलीले मार्यौ, अहिले बोलीले मारिरहेका छौ । तिमीलाई यस्ता स’त्य कुरा सुन्ने फुर्सद छैन । तिमीलाई निम्न काम गर्न विवेक पलाएन है ?
१, गरिब देशहरुले आन्तरिक रुपमा देश भित्र लकडाउन लगाउन हुँदैन । जनता त्यसै त गरिब छन् । लकडाउनले झन मर्नेछन् । धनी देशहरुले पो धेरै ब’र्षसम्म जनताको लागि राहत, सेवा, सुविधा र उपचारका विधी अपनाएका हुन्छन् । उनिहरु लकडाउन धा’न्न सक्छन् । तर, हामी सर्तक हुने हो । देशै बन्द गरेर होइन, भन्ने किन बुझ्दैनौ ?
२, भारत तर्फको सिमाना पुरै ब’न्द किन गर्देनौ ? नेपाल भित्र यो रोग फैलिएकै छैन । विदेशवाट आउनेलाई रोक्यो भने नेपालमा लकडाउन चाहिन्न भन्ने हिम्मत किन राख्न सक्दैनौ ?
३, गर्नुपर्ने काम गर्देनौ । भारतवाट सामान ल्याउँदा चालक र कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य प’रिक्षण गरेर मात्र आउन देउ । अरु मान्छे अहिले आउन पुरै बन्द गरिदेउ । अनि, कहाँबाट छिर्छ कोरोना ? कोरोना भाइरस आकाशवाट उडेर आउने होइन भन्ने किन बुझ्दैनौ ? मानिसले ल्याउने हो, मानिसलाई आउनै नदिएपछि देश भित्र किन चाहिन्छ, लकडाउन ?
४, कुनै सवेदनशिल क्षेत्र, जिल्ला मात्र वन्द गरिदेउ । जसरी चीनले वुहान शहर मात्र बन्द गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनेर चीनले पुरै देश कहिल्यै ब’न्द गरेन । आपतकाल घोषणा गरेर जापानमा कुनै बन्द छैन । धेरै देशहरुले घरमा अनिवार्य बस्नु भनेपनि अनिवार्य गर्नुपर्ने काम रोकेका छैनन् । र जनतालाई सास्ती दिएका छैनन् । किन दक्षिण वा उत्तरकै पिछलग्गु बन्छौ ? कहिलेकांही त आफ्नो मौलिक काम पनि गरेर देखाउ ।
५, लकडाउन गरेका देशहरुको अवस्था हेर । लकडाउन नगरेका स्वीडेनदेखि वेलारुससम्म, भियतनामदेखि तुर्किमेनिस्तानसम्मका धेरै देशहरु हेर । गरिब देशमा लकडाउन लगाउँदा कस्तो असर प’र्छ र हाम्रो सचेतना उपाय अन्य भन्दा किन फरक हुनपर्छ भन्ने हेक्का त गर । कति पराई देश र शक्तिको आदेशवाट सरकार चलाउँछौ ?
Don’t lock in the country. Close the border However, lockdown is not required within the country. Only close the sensitive location. Make your decision, not wait for the order of another country. The order of others to protect their sovereignty is not to wait. How much pain do you give to people by hiding our poor country? Therefore, there is no need to lockdown in Nepal since April 15 [ 2077 Baishakh -3 ] .
Previous देशको १६ अ’र्वको हरेक वर्षको वि’जनेस इ’ण्डियालाई किन दिने ? व’हिष्कार गरौँ- स्वागत नेपाल
Next BREAKING News: वीरगञ्जमा ३ जना भा’रतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पु’ष्टि!